Inona ny DMARC? Ahoana ny fomba fisian'ny DMARC Battle Email Phishing?
Zoma 6 Novambra 2015 Alahady 15 Janoary 2017 Douglas Karr
Raha ao amin'ny sehatry ny marketing amin'ny mailaka ianao dia mety efa nandre izany DMARC. DMARC no mijoro Fanamarinana, fanaovana tatitra ary fanajana ny hafatra miorina amin'ny domaine. Ho fampahalalana fanampiny, tena tiako ny Agari tranokala sy ny azy ireo Pejy fisoratana anarana sy loharanom-pahalalana DMARC momba ny lohahevitra.
Raha ny filazan'ny manampahaizana ao amin'ny 250ok, mpamatsy mailaka anay, ireto ny tombony azo avy amin'ny DMARC:
Manara-penitra ny fandidiana sy ny fandikana ireo kaonty fanamarinana mailaka fanta-daza sy be mpampiasa indrindra SPF sy DKIM.
Manampy anao amin'ny fampiharana sy fametrahana ny SPF sy DKIM manerana ny mailakao rehetra tsy misy tahotra sao hisy fiantraikany amin'ny fitaterana izany.
Mampianatra ISP sy domains manokana amin'ny fiarovana ireo mpampiasa amin'ny mpandefa amin'ny fampiasana tsy ara-dalàna sy tsy voafitaka ny marika sy ny atiny.
Mahatonga ireo mpandray manerantany hamokatra tatitra ara-indostrialy (fa tsy miankina sy ho an'ny masonao irery!) Momba ny mail izay azony avy aminao.
250ok dia nanisy Dashboard DMARC tao amin'ny Reputation Informant, fitaovana mora ampiasana natao hanampiana anao hanamarina ireo firaketana SPF sy DKIM ary koa hanampy anao hanao tetezamita malefaka mankany DMARC.
Izahay dia nanohana sy namolavola ity sary ity mba hanampiana ireo mpivarotra mailaka hahafantatra tsara kokoa ny olana sy ny lanja amin'ny fandraisana ilay filazalazana DMARC. Misaotra manokana ny ekipa DMARC iray manontolo izay nanampy tamin'ny fanabeazana anay sy nanome ny angon-drakitra ampiasaina amin'ny infographic!
Tags: 250okdkimDMARCfamaritana dmarcmailaka mailakaphishing mailakaahoana ny fiasan'ny DMARCspfinona ny DMARC
Ahoana ny fomba hanarahana ny fitarihana avy amin'ny Marketing ka hatramin'ny Sales
Data momba ny mpanjifa tokony harahinao amin'ny atiny ifanakalozanao